Nzira yekuve imwe yemapeji ekutanga pa Amazon.com?
Kutengesa zvinhu zvinotarisana nepamusoro paAmazon, haufaniri kuziva chete kuti kutsvakurudza injini kunoshandiswa sei, asiwo kuti chii chaunofanira kuita kuti uite yakakwirira pane iyi yekutengeserana.
Pane mazano akawanda anobatsira pahutaneti pamusoro pekutsvaga nzvimbo yekutsvaga injini panzvimbo dzakadaro seGoogle neBing kupfuura kuvandudza maitiro ako kuonekwa kuma Amazon ekutsvaga.
Tinonzwa kuti nyaya yekuenda ku TOP pane Amazon.com inofanira kuongororwa zvakadzama. Ndicho chikonzero ichi chinyorwa chinozvipira kune mazano anobatsira kusimudzira nzvimbo yako kuAmazon.
Amazon inoshandisa maitiro akasiyana-siyana ekuonekwa kwezvinjini kuti aone chikwata chekugadzira peji, kusanganisira kutsvaga mararamiro, TOP 100 vatengesi n imwe nhengo yeboka, yekare yekufambisa nhoroondo, nezvimwe zvakadaro - peru tour operators.
Nokufungisisa zvose izvi zvakaoma, zvinoratidzika kuti zvakaoma kunzwisisa kuti ungadzidza sei Amazon. Zvisinei, kana iwe ukaparadzanisa nzira imwechete kubva kune imwe, iwe uchakwanisa kuchengeta simba rayo.
Saka, iwe unowanangurira sei kuAmazon uye unosimbisa kutengesa kwako? Muchikamu chino, uchawana mhinduro yakazara kumubvunzo uyu uye zvimwe.
Sei iwe ungava imwe yemisoro pamusoro pe Amazon.com?
Chimwe chinhu chinonyanya kukosha paAmazon ndicho chikwata chekutengesa. Zvinhu zviri nepamusoro ekutengeserana nhamba nhamba zvinowanikwa pa TOP TOP of Amazon search results page. IHE yekutengesa michina yakange iine simba risina kusiyanisa huwandu hwemibvunzo yakawanda yekutsvaga. Zvinoreva kuti kana chikwata chekutengesa chiri nani, huwandu hwemibvunzo yekutsvaga inoita kuti icho chigadzirwa chiwedzerewo zvakare.
Kana iwe uchida kukurumidza kutora maitiro eAmerican listing kugadzirisa uye kuwana kuonekwa kwakawanda mumigumisiro yekutsvaga, iwe unoda kuwedzera nzvimbo yako yekutengesa nokukurumidza.
Unoda kutanga nzira yako yekugadzirisa kuburikidza nekuisa pfungwa pakuvandudzwa kwehuwandu hwekuvandudza. Iwe unogona kushandisa marudzi akasiyana-siyana ekutsvaga uye kukurudzira kuendesa motokari yakananga kumiti yako. Mukufamba kwenguva, ichakubatsira iwe kuti uwedzere mararamiro ako kuAmazon search.
Kuvandudza mararamiro ako kuAmazon, unofanira kubhadhara zvakanyanya pamatunhu makuru. Regai tinyatsotarisisa kuti rinoshanda sei.
Kutsvaga Amazon, unogona kunyatsotsanangura chikwata chepamusoro-soro kana kuti kutsvaga mumadhipatimendi ose aripo. Kana uri kutarisa kutsvaga mumatare ose, kutsvaga kwekutsvaga kwemubvunzo wako kunodzorerwa kumatare ose ayo maikodhi akakodzera anorongwa. Kuti kuderedza mitsva yavo yekutsvaga, vamwe vashandisi vangave vachitsvaga pamigumisiro pasi pemidziyo Kunyange zvakadaro, chigadzirwa chakanakisisa chakatengesa mushandisi ari kutsvaga chinowanikwa munharaunda yakawanda. Kushandura pane zvikamu zvakatsvaga zvitsva zvinotsvaga zvichaita kuti mumwe munhu atsvake mukati mechikamu panzvimbo pemamwe madhipatimendi.
Ndicho chikonzero ndinokurudzira zvakasimba kusashandisa "Appliances" sepamusoro-soro yezvinhu zvako sezvo zvigadzirwa zvako zvinogona kuva zvisingaoneki mumigumo yekutsvaga. Panzvimbo payo, ita mhando dzakawanda dzekutsvakurudza misika uye nyora zvigadzirwa zvako muboka repamusoro umo zvinonyanya kutengesa kukwikwidzana michina zvakanyorwa.